နိုင်ငံ တကာရေ ကြောင်း ကုန်သွယ်မှု ကျ ဆင်းနေခြင်း ကြောင့် မြန်မာ သင်္ဘောသား ဈေးကွက် ကျဆင်း နေကြောင်း... ~ MSU Portal
နိုင်ငံ တကာရေ ကြောင်း ကုန်သွယ်မှု ကျ ဆင်းနေခြင်း ကြောင့် မြန်မာ သင်္ဘောသား ဈေးကွက် ကျဆင်း နေကြောင်း...
5/23/2013 04:27:00 AM Navi Kyaw No comments
ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှု ကျဆင်းလာတာ ရဲ့အကျိုး ဆက် ကတော့ သင်္ဘော ပိုင်ရှင်တွေ ကသူတို့ ရတာနည်းလာတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ က သူတို့ ရဲ့ အသုံး စရိတ်ကာမိအောင် သင်္ဘော ပေါ် က သင်္ဘောသား တွေရဲ့ လစာ လျှော့တယ်။ သင်္ဘောသား ဦး ရေ လျှော့ခေါ် လာတယ်။ နိုင်ငံခြား သင်္ဘောကုမ္ပဏီတစ်ခု မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး ပြော ကြား ဟု ဂျာနယ်တစ်ဆောင်တွင်တွေ့ ရပါတယ်။
(မေး ချင်တယ် ဗျာ ။ သူဌေး ဘက်ကြည့်တော့လည်း မှန် ပါတယ်။ သူပေး ရတဲ့ လစာ ငွေ က သင်္ဘောသား သူ့သင်္ဘောပေါ် မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သင်္ဘောသား တင်ပေး ရတာ မဟုတ်ဘူး လေ။ ကုန်းပေါ် မှာရှိ တဲ့သူ့သင်္ဘောကုမ္ပ ဏီ ဝန်ထမ်း တွေ ဥပမာ Techanical superintendent ။crewing manager ။admiral and financial manager။ Accounting manager
။ Human resources and training manager ။ စသဖြင့် ပေါ့ shipping company office မှ ဝန်ထမ်း အား လုံးပေါ့ သူဌေး ရဲ့ သင်္ဘော တွေသင်္ဘော ရပ်ထား ရလို့ ကုမ္ပ ဏီဝန်ထမ်း တွေ အားလုံး လစာ လျှော့ ယူ ကျ ဆို လျှင် ရော နောက်နေ့ ကုမ္မဏီ သူဌေး စာပွဲ တွင် အလုပ်ထွက်စာ များ သာမြင်ရ မည်။
နဂို စာရေး နှစ်ယောက် အလုပ်အကိုင် မကောင်း လို့ တစ်ယောက်ပဲ ထား တော့ မယ်။ တစ်ယောက် အလုပ်ဖြုတ် တယ်ပေါ့ အလုပ် သဘော အရ ရော ။လူ သား ခြင်း စာနာ မှု အရ ရော ဖြုတ်မည့် ကုမ္မဏီ ဝန်ထမ်း ကို တစ်လ ကြို ပြော ပြီး လစာ (သုံး )လစာ ပေးရ ပါတယ်။ ကျန်ခဲ့ တဲ့ တစ်ဦး ကိုလည်း အလုပ်အရည်အသွေး မကျ ဆင်း စေအောင်ထိန်း တဲ့ အနေနဲ့ ဥပမာ။ ။ ကုမ္မဏီ မှာ အရှုံပေါ်တယ် ထိုကြောင့် ဝန်ထမ်း ဦး ရေ လျှော့ ရ ပါတယ် ။ နဂို နှစ်ယောက် လုပ်ရ မည့် အလုပ် ကို တစ်ဦး ထဲ လုပ်ရ တော့ မည် ဖြစ်သဖြင့် ကြိုးစား ကျပါ ပေါ့ ။ ကုမ္မဏီ အသုံး စရိတ် လျှော့ ကျအောင် လုပ်ဆောင်ပေး ကျပါ ။ ဆိုကျပါစို့ နဂို ရုံး ကိစ္စ အတွက် ကုမ္မဏီကား သုံး မည့်အစား Bus ဖြစ်ဖြစ် MRT ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ သုံးပေး ကျပါပေါ့။ နဂို စာရွက် ၄ရွက် ကုန်မည့် နေရာ တွင် တစ်ရွက်လျှင် ရှေ့ ဘက်ရော ကျော ဘက်ပါ အသုံး ပြု လျှင် နှစ်ရွက်ပဲ ကုန်မည် ။နှစ်ရွက် save ဖြစ်မည်။.... စသဖြင့် ထို အချိန် တွင် ကုမ္မ ဏီ မှာ ကျန်ခဲ့ တဲ့ ဝန်ထမ်း အထက်မှာ ပြောခဲ့ တဲ့ စာရေး ပေါ့ လစာ လျှော့ ပေး မည်ဆို လျှင် ထို စာရေး ကရော ထိုကုမ္ပဏီ မှာ အလုပ်ဆက် လုပ် ဦးမည်လား။ (ဦး ရေ။အရေ အတွက် လျှော့ တယ် ကိုဆို လိုပါသည်။)
နဂို A/B (သို့) OILER နှစ်ယောက်စီ ရှိတဲ့ သင်္ဘော တစ်စီး A/B(သို့) OILER တစ်ယောက်စာချုပ်ပြည့် လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် သူဌေး မှ လူ လျှော့ လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ပြန်ပြီး လို့ ပြန်တဲ့ လူ တစ်ယောက် အစား လူစား မပို့ ပေးတော့ဘူး။ ( သင်္ဘော ပေါ် မူတည်ပြီး ဘယ် အဆင့်နှင့်ဝန်ထမ်း ဦးရေ အနည်းဆုံး မည်မျှ ထား ရမည် ဆိုတာ ပြ ဌန်း ထား ပြီးသား ပါ။ A/B ၃ဦး လုပ်ကိုင် သော ထို အမျိုးအစား သင်္ဘော တွင် ၂ဦး အနည်း ဆုံး ထား ရမည်ဆို ကျပါစို့ ၃ဦး မထား လည်း ဥပဒေနှင့် ညီသည့် အတွက် မှန် ပါသည်။) သင်္ဘော ပေါ်ကျန်ခဲ့ တဲ့ A/B ကို ပါ လစာ လျှော့ လို့ ဖြစ်မည်လား။
ရှင်းရှင်း လေးပါ။ လူသား တစ်ဦးမဆို နဲ့ စက်ပစ္စည်း တစ်ခု မော်တော်ကား ဆိုကျပါစို့ 60km/h အရှိန် လို ချင်တယ် ။လို ချင်ရင် လီဗာ ကို ပမာဏ တစ်ခု တော့ နင်း ထား ရတာပဲ။ လီ ဗာနင်းတာ ကို လျှော့ပြီး ကား ကို နဂို အတိုင်း 60km/h တော့ မရ နိုင်ပါ။
ရေကန် တစ်ကန် မှာ ရေ လီတာ ပေါင်း ၅၀၀ ရှိတယ်။ လူနှစ်ဦး ကို ခပ်ထုတ် ခိုင်းတယ်။ သူတို့ နှစ်ဦး အတွက် တစ်ယောက် စီကို ၅၀၀ စီ အခကြေး ငွေ ပေး ရတယ် ။ တစ်ဦးစီ မှ ရေလီတာ ၂၅၀ သာ ခပ်ထုတ် ရမည်။ ၁နာ ရီ အချိန် ကြာ သည်။
နောက် အခြေအနေတစ်ခု အဆိုပါ ရေ ကန် မှာ ၅၀၀ လီတာ ရှိတဲ့ ရေ ကို လူတစ်ဦး ခပ် ထုတ်ခိုင်း မည် ။ အခကြေး ငွေ အဖြစ် ၅၀၀ ပေး ရမည်။၁နာ ရီအတွင်း ပြီး တယ်။ အကျိုးဆက် အဆိုပါလူ နဂို လူ ထက် ပင်ပန်းမည်။ ထို အခါ အခကြေး ငွေ ၅၀၀ ဆို လျှင် အဆိုပါ လူ ဆက် လုပ် မည် ။ ထိုအချိန်အခကြေး ငွေ ၅၀၀ အစား ၃၀၀ သာပေးမည်။ အဆိုပါလူ မလုပ်နိုင်တော့ပါ။
အဆိုပါ လူ မလုပ်နိုင်လျှင် အခြားရပ်ကွက်မှ လူ ခေါ် ခိုင်းမည်။ အကျိုး ဆက် အရင် ၅၀၀ ကုန် မည် ခု ၃၀၀ သာကုန်မည်။
ရေ ခပ်ထုတ် တာ ၄၀၀လီတာ ရ ပါ သည်။ အလေအလွင့် ၁၀၀လီတာ။(အလုပ်အရည် အသွေး ကျဆင်း ကြောင်း ကို ဆိုလို ပါသည်)
ထိုအတွေ့အကြုံ လေးတစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဥရော ပစီးပွား ရေး ပျက်ကပ် ကြောင့် သင်္ဘော ကုမ္ပဏီ တွေ အထိနာ နေတဲ့ အချိန် သင်္ဘောပေါ် ကို superintendent တစ်ဦးလာစစ်ဆေးပါတယ်။ လူဦးရေ လျှော့မည် ဖြစ်ပြီး လစာတော့ မလျှော့ ပါဘူး အား လုံးအတွက် အခက်အခဲ ချိန်ဖြစ်သည့်အတွက် company အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေသော သင်္ဘော သားများကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပြီး သင်္ဘောသား အနေ နဲ့မည်သို့  သူ့ ကုမ္ပဏီ ကိုကူညီနိုင်မလဲ ဆို သောမေး ခွန်း ကို ကျွန်တော် မြန်မာ နိုင်ငံသား တစ်ဦး ထဲ သာ ရှိသော ထိုသင်္ဘောတွင် ပထမဆုံး ကျွန်တော့ကို မေးပါသည်။ ကျွန်တော် ဖြေ ခဲ့ သည် က Control the waste to save. ဥပမာ အရင် သုံးတဲ့ chemical ၂ လီတာ အစား ၁လီတာ သာသုံးမည်။ တစ်ကယ်လုပ်ခဲ့လား မလုပ်လား ဘုရားသာ သိမည်။ ကုမ္မဏီ ရုံး ဝန်ထမ်း တွေ ရဲ့ ခရစ် စမတ် ပါတီ နှင့် summer ပါတီ တွေ ကတော့ ခြိမ့်ခြိမ့် သဲ ကျင်းပခဲ့ကြောင်းကို ကုမ္မ ဏီ ရဲ့ new settler မှာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး သင်္ဘော မှာ ခရစ်စမတ် ပါတီ ပေးဖို့ အတွက် တစ်ယောက် လစာမှ ၂၅ ဖြတ်မည် ဆိုသော အခါ ဖလစ်ပိုင် သင်္ဘောသားများ ကောင်းမှု ဖြင့် seamen mission( seamen club) မှ ချောကလက်။ မုန့်ဗူး ။ ချို ချည် ။ဦးထုပ်။ စသဖြင့် ဦးရေ အလိုက် ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်များ လာပို့ ပေးပြီး မာစတာ ကြီးအား ပါတီ ဘာ လို့ မပေးတာ လဲ ဟုမေးခွန်း လေးမေးသဖြင့် ကောက်ခါငင် ခါ ထိုည အကင်ကို လစာထဲ မှ မနှုတ်ပဲ စားခဲ့ရပါသည်။
နေရာ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အဝေးကြီး ရောက်နေတဲ့ ပါမုန့် စားတဲ့ လူဖြူ များနေတဲ့ နေရာ။ အေးရင် အနွေးထည် မရှိဘူးလား ။company က မပေးဘူးလား? အစားအသောက်အဆင်ပြေလား? မေးခွန်းများ ကို အသား ဖြူ ဖြူ နှင့်လူများ လာလာမေးတတ်သောနေရာ။
သင်္ဘောသား အလုပ် ကို လူရာ မသွင် ချင်သော လူဖြူများ (developed country) နေတဲ့ နေရာ။ သင်္ဘောသား တွေ အထီကျန် ဆန်တာ ကို စကားစမြည်း လာပြော ပေးပြီး ဖုန်းကဒ်။ လက်ဆောင်။ အင်တာနက် စသဖြင့်ဈေးပေါ ပေါဖြင့် ရောင်းပေးသောနေရာ။
Life can be lonely and hard for the seafarers who cross the world's seas and oceans to bring us over 90 percent of our everyday need.ဆိုပြီး သူ့ကျေးဇူး ကိုယ်ကျေး ဇူး သိပြီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ် (sympathy )ရှိတဲ့ နေရာ။
Seafarers have one of the loneliest and toughest jobs in the world,everyday thousands of ship sail the world's seas and oceans opteated byasmall number of crew who spend months aways from those they love.ဆိုပြီး သင်္ဘောသား ဘဝကြမ်းတမ်းကြောင်း ကို နားလည်ပေးတဲ့ နေရာ
ထိုနေရာ မှာ ဖုန်းကတ် ရောင်း ပေးတဲ့ သူက တုန်တုန် ချိချိ အဖိုး ကြီးစကား လာပြော တဲ့ လူက သူ့မိန်းမ။ ပင်စင် စား တွေပါ။ လစာ မယူဘူး သင်္ဘောသား အတွက် volunteer လာလုပ်ပေး တယ်။တစ်ခါ တစ်ခါ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား လေးတစ်ဦးစ နှစ်းဦး လာ ကူ ပေးပါတယ်။ သင်္ဘော ဆိပ်ကမ်းတာဝန်ရှိ သူဆီဖုန်းဆက်ပြီး သင်္ဘောသား ဖုန်းဆက်ချင်လို့ ဆိုလို့ Sunday close ဆိုပြီးရေးထားတဲ့ အဆောက်အဦး သေးသေးလေး ရှေ့ မှာ Sunday ညနေ ဖက် ကိုယ်ပိုင်ကား လေးရပ်ပြီး လင်မယားအဖိုးကြီးနှင့် အဖွား ကြီး နှစ်ယောက် စောင့်နေရတာ ကြာလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ဆို ပြီး hi ဆိုပြီး စကားစပြော တဲ့ နေရာ ။
သေချာတာတစ်ခု ကတော့ သင်္ဘောသား ငွေ ကိုအိမ်ပို့ စရာရှိရင် onboard ကျန်ငွေ နည်းလေးလေး ယူပြီး အဲ့မှာ အချိန်ဖြုံးတဲ့ နေရာ။ အခြားနေရာသွားလျှင် ပိုက်စံကုန်မည် လေ ။ ထိုနေရာမှာ ဘာမှ သိပ်မကုန် စေတနာရှိလျှင် ငါးမူး ဆယ်ပြား လှူ ခဲ့ဖို့ ထား ခဲ့ နိုင်တဲ့ box လေးရှိတဲ့ နေရာ။
အတွေ့အကြုံ လေး နောက်တစ်ခု သင်္ဘောသား တစ်ယောက်ပေါ့ မြန်မာ မှာ စာချုပ် ချုပ်တဲ့ အခါ ဒီ လစာ ဒီရာ ထူး အချိန် အား ဖြင့် ဘယ်နှစ်လ ပေါ့ သင်္ဘော နာမည် ဘာပေါ့ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် သဘော တူကြောင်း ပေါ့ လက်မှတ်ထိုး ပါတယ်။ ကြား ကလူ ကတော့ သင်္ဘောသား တစ်ဦးစီ အတွက် ရာခိုင်နှုန်း စားပြီး ရပြီးသား သို့ လစာ အနေနဲ့ သင်္ဘောသူဌေး က ပေး ပြီးသားပါ။
သင်္ဘောသား လစာ မရတာ နှစ် လရှိပြီ ။ ထိုသင်္ဘောသား ထမင်း မငတ် ဘူး။သူဌေး လဲအေးဆေး ပါ။ ကြားလူ အပြုံးမပျက် ဆဲပါ။ သင်္ဘောသား မိသားစု စားစရိတ် သားသမီးကျောင်း စရိတ် သင်္ဘောသား မိန်းမ အတိုး နဲ့ လူများ ဆီက ချေးပြီး ဖြေရှင်း ရပြီပေါ့။ တချို့ ပြော လို့ပါ သင်္ဘောသား ရန်ကုန် ပြန်နားတော့ ရောဘာနဲ့စား မလဲပေါ့။ leave pay လေးထုတ်ပြီးစား ပေါ့။ ကုန်သွားတော့ရော မကုန်ခင် အလောသုံးဆယ် သင်္ဘောပြန်တက်ဖို့ ကြိုးစားပေါ့။
သင်္ဘောသား လစာ မရတော့ ဘယ်သူ့ ကိုမေးမလဲ။
သင်္ဘောရဲ့ တာဝန် အကြီးဆုံး ယူထား သော MASTER ကိုမေး မည်ပေါ့။
အခြာနိုင်ငံသား တွေ ရတယ် မိမိ ဘာလို့ မရသေးလဲ WAGES ACCOUNT စာရွက်။
ရုံးချုပ်မှ မပို့ သေးလို့ ပါ။ သူ MAIN OFFICE ကို မေးပေးပါမည် စိတ်မပူပါနဲ့။
(MASTER သည် သူ့ ၏တာဝန် သူယူသည်။ သင်္ဘော ပေါ် မှာတစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်သမျှ သူနှင့်ဆိုင် သည် ဟု သူ၏ပုခုံး ပေါ် မှဘားလေး ဘား ဖြင့် သက်သေထူထားသည်)
WAGES ACCOUNT ရောက်လာ သည်။ စာချုပ်ပါ အချက်အလက်နှင့် လစာငွေ ကွာနေသည်။
MASTER ကို စာချုပ်ပြ ပြီး သူ့ ဖတ်ကြည့် ပြီး လစာငွေ ကွာသည်ကို လက်ခံ သည်။ ဘာ တွေ မှားနေလဲ သိအောင် MAIN OFFICE ကို စာပို့ ပေး မည်။ တစ်ခုခု မှားနေကြောင်း သူ အမှားမဟုတ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။ သင်္ဘောသား လည်း မိမိနိုင်ငံမှ manning agent ကိုဖုန်းဆက် ပြီးမေးပါလို့ အကြံပေး ပါသည်။
သင်္ဘောသား ဖုန်းဆက် မေးပါသည်။
ဆရာ ကျွန်တော် လစာ မရတာ ၂လရှိပြီ ကူညီပါအုန်း။ အခြာနိုင်ငံသား တွေရပြီး ကျွန်တော် မရသေးဘူး။
အဲ့ဒါသူနဲ့ မဆိုင် ပါဘူး သင်္ဘော MASTER မေးပါတဲ့။
ကျွန်တော်မေးပြီးပါပြီ MASTER ကMAIN OFFICE စာပို့ထားပါတယ်။
အေးခဏ စောင့် ပေါ့။ ငါလည်း မေးလ်ပို့ပြီး မေးပေးမယ်တဲ့။
နောက်နေ့ သင်္ဘောသို့ စာချုပ် အသစ် ပို့ ပေးသည်။ MASTER က ပေးပြီး သေသေချာ ချာ ဖတ်ပြီး မိမိဘာသာ ဆုံးဖြတ်စေပါသည်။ ဖတ်ကြည့်တော့ pay scale ကို ရန်ကုန် မှစာချုပ်နှင့် မတူ ဘဲ
MASTER ကို မိမိ လက်မှတ်မထိုးနိုင်ပါ ပြောတော့ စာချုပ်မရှိလျှင် ခုရောက်မည့် နိုင်ငံတွင်ပြန်ရပါမည်။ ပြန်လျှင် မိမိစရိတ်ခံ ပြီး လာလဲမည့်လူရော မိမိ အတွက်ပါ လေယဉ် ခကုန် ပါမည်။ မိမိ နိုင်ငံ မှအေးဂျင့် ကို ဖုန်းဆက်ပြီးမေးပါအုန်း။ သူ့ဘက်မှ ဘာမှ ပြောင်းလည်းခြင်း မဟုတ်ပါ။ COMPANY နှင့် AGENT တစ်ခုခု မှားနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သင်္ဘောသား ဖုန်းဆက်မေးတော့ လက်မှတ်ထိုး ပေးလိုက်ပါ။ မထိုးလျှင် ပြန်ရမည်။ သင်္ဘောပေါ် မှလစာ မရသည့် ကိစ္စ သူနှင့် မဆိုင်ပါ။ သင်္ဘော MASTER နှင့် ဆိုင်ပါသည်။ သင်္ဘောသည် Trading area အရ လစာ ပြောင်းပါသည်တဲ့။ ကွာတဲ့ amount မများ ရင်ထိုးပေး လိုက်ပါတဲ့။ seatime ပြည့်ရင် စာမေးပွဲ ဖြေ မယ်မလား(ဒီတစ်ခါပြီးရင်စာမေးပွဲ ဖြေမည် ကို ကြို ပြောထား ပါသည်)။ စာချုပ်မပြည့်ပဲပြန်လာလျှင် SECDတွင် စည်းကမ်း ထိမည်။ CDC အပိတ်ခံထိမည်။ ရှေ့လူတွေ ကြုံးဖူး လို့ ပြောတာတဲ့။ ဒီလိုပဲ အရာရှိမဖြစ်ခင် အနာခံလိုက်ရတယ်တဲ့။
ဆရာ ကျွန်တော် ထိုးထားတဲ့ စာချုပ် က ဒီလစာ ဒီရာထူး အချိန် ဘယ်နှစ်လ အလုပ်လုပ်ရမည်ဆိုပြီး ထိုးထားတာပါ။သင်္ဘောပေါ် ရောက်မှ ပြင်တာ တော့ မိမိ စာချုပ်သစ် ကိုလက်မှတ်မထိုးပေး နိုင် ကြောင်း။ ကွာသွားတဲ့ လစာ က တစ်လ ၃၀၀$ ၁၀လ ဆို ရင် ၃၀၀၀$ ပါဆရာ ။ မိမိလစာ ၃လစာ ရှိကြောင်း ပြောပြပါတယ်။
မိမိဘာသာ ဆုံးဖြတ် ပါတဲ့။ သင်္ဘောပေါ် ကကိစ္စ သင်္ဘောပေါ် မှာ ရှင်းပါ သူနဲ့ မဆိုင်ပါ ဆိုပြီး မဆိုင်ကြောင်းသာ ထပ်နေပါတော့သည်။ ပြန်လာလျှင်တော့ မည်သို့ ဖြစ်မည် ကိုသူလည်းမသိပါ ဟု ဖုန်းချ လိုက်ပါသည်။
ဒီလိုနဲ့ MASTER ကျေး ဇူး ကြောင့် အခြားအစီးပြောင်း ပေးပါသည်။
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့အေးဂျင့် ရဲ့ ကောင်းကောင်းကို အပြောခံ သြဝါ ဒ အပေးခံ ရပါသည်။အေးဂျင့် သမီး ကအဆိုးဆုံး ကျေးဇူး မသိတတ်ဘူး။စာမေးပွဲ အောင်ရင် လိုင်းကထွက်မည်။ သင်္ဘောမတက်ခင် ကမျက်နှာ တစ်မျိုး သင်္ဘောပေါ် ရောက်တော့အချိုးတစ်မျိုး (ဘုရားသာ သာ အသိဆုံး ပါ မိမိ အချိုးပြောင်း မပြောင်း အမှန်မှာ ဆရာဆူ လျှင် လက်ခံသေး သည်။) ခု စာမေးပွဲ ဖြေမယ် မလား လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း ကို စာအောင်ပြီးလျှင် ပေးတဲ့ လစာ ပေးတဲ့ ရာထူးနဲ့ လိုက် ရမည် မလိုက်နိုင်ပါ က ထိုစာရွက်စာတမ်း များ လုပ်ပေးမည်မဟုတ် ပါတဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် လိုက်ပါမည် ဟုကတိပေးပါသည်။
မိမိ က စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးပေး ရမည်။ ထိုပြီးမှ စာရွက်စာတမ်းများ မှာ Local rep ရဲ့ လက်မှတ်ထိုးပေးမည်။
နောက်ရက် ကျွန်တော် သွားတော့ စာရွက်တွေထား ခဲ့ ပါ။လက်မှတ်ထိုးပြီး တံဆိပ်တုံး နှိပ်ပေး ဖို့ မနက်ဖြန်မှ လာယူပါတဲ့။ ကျွန်တော် သူတို့ တအားအလုပ်ရှုပ်နေလျှင် မပြောပါ။အဆိုပါ သူ့သမီ ရဲ့ ဘေး မှာ ထိုင်နေသောဆရာ လက်မှတ်တစ်ခုထိုး ပြီး တံဆိပ်နှိပ်ဖို့ ဘယ်လောက် အချိန်လေး ကြာလို့ လဲ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိ ရင် သူ့ မှာနောက်ရက် လာရမည် ။ သူဒီနေ့ အလုပ်ကိစ္စပြီးပါစေလေ။ နောက်ရက် ထပ်မလာ ရတော့ဘူး ပေါ့။အော်တွေးမိလိုက်ပါ တယ် ။
ဟိုး မြန်မာပြည်မှ ဝေးသောနေရာ လေးမှ အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယား ရဲ့ အပြုံးsunday လာဖွင့်ပေးသော အပြုံး ။
တလော က တွေ့မိပါ သည်။ ဘုရားမှာရိုက်ထားသော လယ်ကတုံး အဖြူ နှင့် ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ
သမီးဖြစ်သူရဲ့ FB မှ coverအဖြစ် လုပ် ထားသော ဘုရားပုံ။
ရပ်မိပါသည် သင်္ဘောသား အလုပ်။
ပြောမိပါသည် အတွေ့အကြုံ ။